(Isaorana hatrany ny Namana mpahay Lalàna mitondra amintsika fanazavana)
Ny famindràna toerana ny olona voafonja vonjimaika ("transfèrement de personnes détenues préventivement") dia fehezin'ny andininy faha-116 sy ny manaraka amin'ny Didim-Panjakàna ("Décret ") 2006-015 tamin'ny 17/01/2006 mahakasika ny Fandrindràna ankapobeny ny Fiadidiana ny Fonja ("Organisation générale de l'Administration Pénitentiaire").
Voalazan'ny andininy 118 fa ny FAMINDRàN-TOERANA NY VOAFONJA iray dia TSY AZO TANTERAHINA RAHA TSY MISY NY BAIKO AN-TSORATRA NATAON'NY "fahefàna mahefa" ("Art.118- Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit de l’autorité compétente").
Ny fanontaniana mipetraka voalohany dia: IZA àry IO "FAHEFàNA MAHEFA" MANOME NY BAIKO IO?
Raha toa ka iray fari-piadidiana ara-ponja ("même circonscription pénitentiaire") ny Fonja nitazonana sy ny Fonja hamindràna dia ny TALEM-PARITRY NY FIADIDIANA NY FONJA ("Directeur Régional de l'Administration Pénitentiaire" na DIRAP) no manome ny baiko hanatanterahana ny famindràna ("transfèrement").
Raha samy hafa kosa ny fari-piadidiana misy ny Fonja itazonana ilay voafonja hafindra sy ny Fonja hamindràna (Ohatra: Voafonja any amin'ny Fonjan'i Toliary hafindra ao Antanimora) dia ny TALE JENERALIN'NY FIADIDIANA NY FONJA ("Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire" na DGAP) no manome ny baiko!!
Raha toa anefa ka mbola ao anatin'ny Famotorana ("instruction") ny raharaha dia TSY MAINTSY MISY NY FANEKENA MIALOHA ("accord préalable") AVY ANY AMIN'NY Mpitsara Mpanao Famotorana ("Juge d'Instruction") vao azo tanterahina ny Famindràna toerana ilay Voafonja vonjimaika! Izany dia mifanaraka amin'ny voalazan'ny Andininy 551 ao amin'ny Fehezan-Dalàna momba ny Paikady Heloka ("Code de Procédure Pénale").
Fanontaniana faharoa mipetraka: "REHEFA INONA NO AFAKA AFINDRA TOERANA NY VOAFONJA IRAY?
Roa ny valiny:
1-) Rehefa MANAO NY FANGATAHANA ny Hamindràna AZY any amin'ny Fonja hafa ILAY VOAFONJA na NY HAVANY na ny Mpisolovava azy!
2-) Rehefa HEVERIN'NY "Fahefàna Mahefa" voalaza etsy ambony fa TOKONY ATAO izany famindràna izany!
Tsara marihina fa eo ambany fiadidian'ny Ministry ny Fitsaràna ny Talen'ny Fonja rehetra! ..Koa raha omeny ny baiko ny amin'ny hamindràna ny voafonja dia..TSY MAINTSY TANTERAHANA izany!
Aleo dia tsorina araka izany fa ..MASI-MANDIDY tanteraka ny amin'ny antony heveriny fa hamindràna ny voafonja iray ny Ministeran'ny Fitsaràna.